Amaqela e-WhatsApp omculo eColombia. Amaqela aphambili eColombia?
Kule post ndifuna ukwabelana nawe ngcono amaqela e-whatsapp zomculo eColombia.
1 Amaqela omculo weWhatsapp eColombia
2 Amakhonkco amaqela e-WhatsApp omculo eColombia
3 Amaqela omculo we-WhatsApp eColombia ??
3.1 UMCULO KUNYE NOMCULO WAMABHUNGA OLIMI IBHODI
3.2 Ukumkanikazi ngonaphakade
3.3 UMculo wethu
3.4 Ilayibrari yamatye kunye Metal
3.5 Iintombazana ezi-Rumberas ezivela eBogotá
3.6 Umculo we-elektroniki
3.7 Intsapho yomculo
3.8 Iimfazwe ze-Rap kunye nokunye
3.9 Iividiyo zomculo kunye nemifanekiso
3.10 Zonke iintlobo zohlobo lomculo
3.11 I-Hip Hop (i-Rap)
3.12 I-remix egqibeleleyo
3.13 I-XANARCHY MILITIA
3.14 I-bunni embi
3.15 Usuku lokulinganisa
3.16 Ngomso dj
3.18 Umculo wesiNgesi
3.19 Punk, anti yonke into
3.21 Umculo wobuKristu kuphela
3.22 Amatye aluhlaza aqinileyo
3.24 Ukulahleka kwabantwana Naphi na
3.25 Bayandigqitha iphepha
3.26 Ngaphandle kwemida okanye izithintelo
4 Nyusa amaqela omculo weWhatsapp avela eColombia
5 Yenza iqela loMculo weWhatsapp waseColombia
Ukuba uyawuthanda umculo kwaye uyiColombian okanye uhlala eColombia, ke ungakujoyina eyona ilungileyo Amaqela e-WhatsApp malunga nomculo.
Apha unokufumana amaqela e-WhatsApp kunye nazo zonke iintlobo zeemxholo zomculo. La ngamaqela adalwe eColombia kwaye agxile kubasebenzisi baseColombia okanye abahlali baseColombia.
Amakhonkco amaqela e-WhatsApp omculo eColombia
Njengoko ndihlala nditsho, ngaphambi kokungena nawaphi na amaqela, kuyacetyiswa ukuba ufunde imigaqo yethu yokusebenzisa kunye nemfihlo.
Ezi zi Amaqela omculo weWhatsapp adalwe eColombia.
Amaqela omculo we-WhatsApp eColombia ??
UMCULO KUNYE NOMCULO WAMABHUNGA OLIMI IBHODI
Ingcaciso: Iqela le-WhatsApp lenza amaqela kunye amaqela omculo eColombia.
Ilizwe leqela: EColombia
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp labathandi beKumkanikazi.
Inkcazelo: Iqela leWhatsapp ukuthumela umculo weTrap.
Ilayibrari yamatye kunye Metal
Inkcazelo: ezahlukeneyo Rock kunye Metal albhamu, ukuba asinayo i-albhamu oyikhangela sizama ukukufumanela yona.
Iintombazana ezi-Rumberas ezivela eBogotá
Inkcazelo: Shicilela iikhosi zakho okanye ufumanise malunga nezifundo ezilungileyo eBogota !!!
Ingcaciso: Iqela le-WhatsApp lokwabelana ngekhompyutha nokusasaza izihloko ezitsha.
Ingcaciso: Iqela le-WhatsApp lokwabelana ngazo zonke iintlobo zomculo.
Iimfazwe ze-Rap kunye nokunye
Inkcazelo: Kuphela ngabantu abakwaziyo ukudlwengula okanye ukubetha ukubetha okanye ukwenza ngcono okanye ihip hop okanye imvano-siphelo.
Iividiyo zomculo kunye nemifanekiso
Inkcazo: Kuba abathandi YeLatin ballad kunye nomculo wepop.
Zonke iintlobo zohlobo lomculo
Inkcazelo: Iqela kuphela ukuthumela umculo omnandi kunye neevidiyo.
I-Hip Hop (i-Rap)
Inkcazo: Usapho lweHip hop lilo iqela eliza kuthetha nge-rap.
Inkcazo: Eli qela likhethekileyo kwii-DJs ukuba zisebenzisane kwaye zisinike umculo.
Inkcazelo: Kubo bonke abalandeli beLil xan apha sithetha ngomculo wabo kwaye baba ngabahlobo abatsha kunye nabahlobo abalungileyo ndiyathemba ukuba uyonwabele kwaye sikhula kakhulu.
Inkcazelo: Kubathandi be-ozuna.
Ingcaciso: Iqela ukuba labelane ngomculo.
Inkcazelo: Apha siza kuchitha zonke iintlobo umculo olungileyo.
Inkcazelo: I-WhatsApp iqela leesalserismos.
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp elinomculo wesiNgesi kuphela.
Punk, anti yonke into
Inkcazo: I-punk ska kunye ne-hardcore yonke imihla yonke imihla ujoyine kwaye ufumanise malunga ne-punk yangoku kunye nendawo yesehlo.
Inkcazelo: TrapSpanish WhatsApp Iqela
Umculo wobuKristu kuphela
Ingcaciso: Iqela le-WhatsApp ukuba liphulaphule umculo ongumKristu ogqwesileyo
Amatye aluhlaza aqinileyo
Inkcazelo: Iqela leWhatsapp ukuba babelane ngomculo Rock, Metal, Blues.
Inkcazelo: Iqela le-WhatsApp Kpop International.
Ukulahleka kwabantwana Naphi na
Ingcaciso: I-WhatsApp group yaBantwana abaDakileyo.
Ingcaciso: Iqela leWhatsapp Electrohouse elinomculo we-elektroniki.
Ngaphandle kwemida okanye izithintelo
Inkcazelo: Eli qela lineentlobo ezahlukeneyo zomculo kamsinya nje emva kokuba kuthiwe thaca kwaye sonwabela iiklasikhi ezinkulu kodwa kunye nomculo omtsha okanye wabelane ngomsebenzi wakho ukuba uneebhendi apha sizonwabele ilitye, isinyithi esinzima, umqobo othambileyo, ipunipoli, amandla okutsiba nokunye okuninzi.
Nyusa amaqela omculo weWhatsapp avela eColombia
Ukuba ujoyine nayiphi na kwezi amaqela omculo we-whatsapp I-Colombians, Ndenzele ububele kwaye wabelane ngale posti kwiinethiwekhi zakho zentlalo.
Yenza iqela loMculo weWhatsapp waseColombia
Ukuba awuyifumani Iqela le-whatsapp lomculo eColombia into obuyikhangela, ukhetho oluhle kukuba uzenzele ngokwakho kwaye wabelane ngalo kwiwebhusayithi yethu ukuze kwandiswe abathathi-nxaxheba abatsha. Unako Dala iqela lomculo elikwi-WhatsApp yomculo weColombians kwaye uwupapashe ucofa apha.